» अवार्ड विजेताको जीत होला ?
३० पुष २०७८, शुक्रबार १९:५८
मकवानपुर, ३० पुस । द भोइस किड्स नेपालको सेमिफाईनल राउण्डमा पहिलो र दोस्रो दिन उत्कृष्ट ८ अर्थात फाईनलमा पुग्न लागि १६ जना प्रतियोगीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ती प्रतियोगीहरुमध्ये ८ जना फाईनलमा प्रवेश गरेका छन् । फाईनलमा प्रवेश गरेका ८ जना प्रतियोगीहरुमध्ये २ जनाले पफोमर अफ द डे अवार्ड समेत जितेका थिए । पहिलो सेमिफाईनलमा कोच प्रविशा र कोच मिलनको टिमबाट प्रतिस्पर्धा गरेका ८ जना प्रतियोगीहरुमध्ये कोच प्रविशाको टिममा रहेकी अनुजा कडरियाले पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् ।
त्यस्तै दोस्रो सेमिफाईनलमा कोच प्रमोद र कोच राजुको टिमबाट प्रतिस्पर्धा गरेका ८ प्रतियोगीहरुमध्ये कोच राजुको टिममा रहेकी पासाङ दिक्की शेर्पाले पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । यी दुबै प्रतियोगीहरु अहिले फाईनल भिडन्तमा छन् । अनुजा र पासाङ द भोईस किड्स नेपालको विजेता दाबेदारहरु मध्येका हुन् । ब्लाईण्ड अडिसनमा नै चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल भएका यी दुई प्रतियोगीले सर्वाधिक दर्शक भोट प्राप्त गर्दै विजेता बन्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तपाईको विचारमा के यी दुई अवार्ड विजेताहरुले द भोईस किड्स नेपालको टाईटल जित्न सक्लान् ? के यी दुई प्रतियोगीहरुमध्ये नै कुनै एक प्रतियोगी अरुलाई पछि पार्दै विजेता बन्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
द भोइस किड्स नेपालको फाईनलमा पुगेकी अनुजा कडरिया ब्लाईण्ड अडिसनमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल पहिलो प्रतियोगी हुन् । ९ वर्षीया अनुजा बिर्तामोड झापा निवासी हुन् । ३ वर्षको उमेरदेखि नै गीत गाउन थालेकी अनुजाले युकेजीमा अध्ययनरत छँदा नै स्टेज पफोमेन्स दिएकी थिईन् । त्यस्तै पासाङ दिक्की शेर्पा सुरुमा कोच प्रमोदको टिममा थिईन् । तर अहिले पासाङ कोच राजुको टिममा छिन् । पासाङ द भोईस किड्स नेपालमा चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल आठौँ प्रतियोगी हुन् । १३ वर्षीया पासाङ नयाँपाटी सुन्दरीजलमा बस्छिन् । पासाङ ओखलढुङ्गाकी हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
भोईस किड्स नेपालको ६ रोचक रेकर्डहरु